လူသဈတနျးလဲမဟုတျ ဆရာကွီးလဲမဟုတျသေးတဲ့ ဓါတျပုံဝါသနာရှငျတှအေတှကျ အကွံပွုခကျြမြား - Digital Photography Myanmar
HomeBasic Photographyလူသစ်တန်းလဲမဟုတ် ဆရာကြီးလဲမဟုတ်သေးတဲ့ ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေအတွက် အကြံပြုချက်များ
July 9, 2016 Jedi Basic Photography 2
Photo credit: T3 Online
ယနေ့အချိန်မှာတော့ ဓါတ်ပုံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြံပေးချက်ပေါင်းများစွားဟာ အင်တာနက်မှာ ပြန့်နှံ့လို့ နေပေမယ့် တခါတလေမှာ တချို့လမ်းညွှန်ချက်တွေက လူသစ်တွေအတွက်သီးသန့်ဖြစ်ပြီး တချို့လမ်းညွှန်ချက်တွေက တကယ့်ဆရာကြီးတွေသာ နားလည်လောက်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်မျိုးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီကြားထဲက ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေတဲ့ ဝါသနာရှင်တွေအတွက်က သိပ်မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒီဆောင်းပါးကတော့ ဒီလိုမျိုး ဝါသနာရှင်တွေအတွက် ဦးတည်ပြီး ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီဆောင်းပါးကိုပြုစုဖို့အတွက် သဘောကောင်းလွန်းတဲ့ Jessops Academy ကို ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ရာမှာ အချက်ဆယ်ချက် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေက ကင်မရာကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာ၊ အခြေခံတွေ ပိုင်နိုင်ပြီးသား ဥပမာ ISO ကို ဘယ်လိုနေရာမှာ ကစားရမယ်ဆိုတာတွေ သိပြီးသား ဝါသနာရှင်မျိုးတွေအတွက် အသုံးဝင်လောက်ပေမယ့် ဓါတ်ပုံပညာရှင်ကြီးတွေအတွက်တော့ မလိုအပ်လောက်ဘူးဆိုတာ အရင် စကားခံပါရစေ။ ဒီချက် ၁၀ ချက်ထဲမှာ Sport ဘယ်လိုရိုက်မယ်၊ မိုးသည်းသည်းမည်းမည်းရွာရင် ဘယ်လိုရိုက်မလဲ သို့မဟုတ် Wildlife ဆိုဘယ်လိုရိုက်မလဲ စတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေထည့်သွင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
တင်းနစ်ပွဲကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အစမ်းလေ့ကျင့်နေချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် တင်းနစ် ကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာ ခင်ဗျားကင်မရာရဲ့ မြင်ကွင်းထဲမှာ တချိန်လုံး ရွေ့လျားနေမှာဖြစ်ပြီး ဓါတ်ပုံဆရာအတွက် ချိန်သားကိုက်တဲ့ ရိုက်ချက်တွေ ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ လိုအပ်မှာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲမစခင်မှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ frame ကို နေရာချပြီး နမူနာပုံအချို့ ရိုက်ကြည့်ပါ။ Rule of third တွေဘာတွေသုံးရင်သုံး၊ သို့မဟုတ်လည်း အခြားသော composition သီအိုရီတွေဖြစ်တဲ့ Leading line ပုံစံတွေကို နမူနာအနေဲ့ frame ချနေချိန်မှာ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှာသာလျင် composition အကောင်းဆုံးရဖို့ မျှော်လင့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ သူတို့(တင်းနစ်ကစားသမား) တွေ ခင်ဗျား ဆင်ထားတဲ့ frame ထဲကို ဝင်လာအောင်သေချာစောင့်ပြီးမှ ရိုက်ပါ။ ဥပမာ ခင်ဗျားက တင်းနစ်သမားကို frame ရဲ့ ညာဖက်ခြမ်းကိုပို့ထားတယ်ဆိုရင် သူမျက်နှာမူတဲ့ဘက်က frame ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။
ပြောင်းရှည်မှန်ဘီလူးတွေက လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံတွေရုိုက်ဖို့ မရှိမဖြစ်ပါဘဲ
100 – 400 mm အတွင်းရှိတဲ့ အရာတစ်ခုကို ရိုက်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုပါစို့။ တကယ်လို့များ ခင်ဗျားရဲ့ Prime Lens အရှည်ကို ဆုံလည်အနေအထားအတိုင်းလှည့်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်များလဲ? Focus ဖြတ်မယ့်နေရာကို ကြိုတင် pin point လုပ်ပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့ အရာဝထ္တု တွေရဲ့ ပုံရိပ်ကို လျှပ်တပြတ်အတွင်းမှာချိန်သားကိုက် ဖမ်းယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကစားကွင်းတစ်ခုလုံးကို မြင်စေချင်ရင် frame တစ်ခုတည်းမှာပဲ ထည့်ထားချင်ရင်တော့ Wide Angle နဲ့ fish eye မှန်ဘီလူးတွေက သင့်ရဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ပိုကောင်းအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ရေပြင်ညီမျဉ်းကို သင့်ရဲ့ frame ရဲ့ အလယ်ကောင် တည့်တည့်မှာ ဖြစ်မနေစေဖို့ ကြိုးစားပါ
ဒီတစ်ချက်က တစ်ခုတစ်လေမှာ သင့်ကင်မရာရဲ့ Exposure ကို ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ Rule of third ကိုအသုံးပြုမယ့်နေရာမှာ ရေပြင်ညီမျဉ်းကို သင်ရိုက်ကူးမယ့် frame ရဲ့ အပေါ်ဖက် သုံးချိုးတစ်ချိုး သို့မဟုတ် အောက်ဖက် သုံးချိုးတစ်ချိုးထားကြည့်လိုက်ပါ၊ ကြည့်ရတဲ့သူရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ပိုပြီး ပဒါသ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ရာသီဥတုကြောင့် ခင်ဗျားရဲ့ ဓါတ်ပုံ မပျက်စီးစေပါနဲ့
လှပတဲ့မိုးရေစက်တွေကို အမြတ်ထုတ်ပြီး ရာသီဥတုကို အသုံးချလိုက်ပါ၊ မိုးရေစက်တွေဆိုတာ ကင်မရာနဲ့ ချိန်ဖို့အတွက် စိန်အခေါ်ဆုံး subject တွေထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ ခင်ဗျားရှေ့နည်းနည်းတိုးပြီး မှန်ဘီလူးရဲ့ Aperture ကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ထားရင်တော့ မိုးရေစက်ထဲဖြတ်ဝင်လာတဲ့ လှလှပပပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးလို့ရသလို မိုးရေစက်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာ အလင်းပြန်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုလည်း ရိုက်ကူးလို့ရနိုပါတယ်။
မိုးရွာနေတာကို ပြူတင်းပေါက်ကနေဖြတ်ကြည့်ပြီး ရိုက်ကြည့်ပြန်ရင်လည်း ကောင်းနေပြန်ပါသေးတယ်။ လင်းနေတဲ့နောက်ခံက မိုးရေစက်တွေကို အနက်ရောင်အစက်လေးတွေနဲ့ ဆွဲထားတဲ့ လိုင်းစင်းတွေလိုဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး မှောင်နေတဲ့နောက်ခံကောင်းကင်ဆိုရင်တော့ လင်းနေတဲ့ အလုံးလေးတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြေးနေတဲ့ subject ရပ်တန့်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးကိုလိုချင်လား?
ဒီနေရာမှာတော့ shutter speed မြန်မြန်ဆိုတဲ့အချက်က အခရာကျသွားပါပြီ။ သင့်ကင်မရာမှာပါလာတဲ့ နည်းပညာကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ အသုံးချလိုက်ပါ၊ ခင်ဗျားလုပ်ရမှာက ကင်မရာကိုချိန်ပြီး shutter ကို နှိပ်ရုံပါပဲ။
ဒီလိုဘာလို့ပြောနိုင်လဲဆိုတော့ သင့်ကင်မရာမှာ Sport Mode ဆိုတာမျိုး သို့မဟုတ် အလားတူနည်းစနစ်မျိုးတွေကို semi-automatic ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ထည့်သွင်းပေးထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရာတွေကို အလေ့အကျင့်ရအောင်လုပ်ပြီး လိုအပ်တဲ့အချိန် အသုံးချလိုက်ရုံပါပဲ။
10-20 mm Wide angle မှန်ဘီလူးသို့မဟုတ် အလားတူ မှန်ဘီလူးအမျိုးအစားတွေကိုသုံးပြီး မြင်ကွင်းကျယ် Landscape တွေကို ဓါတ်ပုံတစ်ပုံထဲမှာ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ 24-70 mm မှန်ဘီလူးလောက်ဆိုရင်လဲ frame ကျပ်ကျပ် landscape ဓါတ်ပုံတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ချက်ပဲ ဂရုစိုက်ရမှာက လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ မှန်ကန်တဲ့ gear ကို အသုံးချဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Gear တွေအကြောင်းစပြောတဲ့အခါ ခင်ဗျားရဲ့ ဓါတ်ပုံအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတစ်ချို့လိုမယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ သင့်အတွက်ကွာလတီကောင်းကောင်းနဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ DSLR သို့မဟုတ် Mirrorless ကင်မရာတလုံး လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ ကင်မရာချည်းနဲ့တင်တော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဓါတ်ပုံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ 75-300 mm သို့မဟုတ် 100-400 mm ရှိတဲ့ Long Tele Photo မှန်ဘီလူးတစ်လုံးခင်ဗျားလိုမှာပါ ဒါမှဟုတ်ရင်တော့ ခင်ဗျား ရဲ့ subject နားကို တိုးပြီးရိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် သင့်ရဲ့ subject ကိုခြောက်လှန့်သလိုဖြစ်နိုင်သလို သင့်ကိုလဲပြန်ပြီး အန္တရာယ် ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Burst mode ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီ setting က တခါတလေမှာ အလျင်အမြန်လိုတဲ့အချိန် မျက်စိချော်ပြီး ကင်မရာမှာ ပျောက်နေတတ်ပါတယ်။ အသုံးပြုရတာ ရိုးရိုးလေးပါပဲ၊ burst mode ကိုပြောင်းပြီး ခင်ဗျားကင်မရာ လက်ခံနိုင်သလောက် ရိုက်နိုင်သမျှရိုက်ပါ၊ ပြီးရင် အကောင်းဆုံးတစ်ပုံကို ရွေးယူလိုက်ရုံပါပဲ။
ဘယ် မှန်ဘီလူးအမျိုးအစားသုံးသင့်လဲဆိုတာ အရင်စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ 50 mm မှန်ဘီလူးတစ်လုံးမှာ aperture ကျယ်ကျယ်ဖွင့်နိုင်ပြီး (ဥပမာ f/2.8 or f/1.8) ခင်ဗျားရဲ့ ဓါတ်ပုံထဲမှာ လှပတဲ့ နောက်ခံကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ 70-200 mm လိုမျိုးနဲ့ ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်တော့ လူပုံလှလှလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးပုံထွက်ကိုပေးနိုင်ပေမယ့် အကွာအဝေးတစ်ခုကနေ ရိုက်ကူးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ နည်းနည်းလေး ရိုးရှင်းပေမယ့် နွေရာသီရဲ့ နေရောင်အောက်မှာ ပန်းတွေကို အလှပဆုံး ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ပန်းတွေရဲ့ ပွင့်ချပ်တွေနဲ့ အရွက်တွေကို နေရောင်အစွမ်းနဲ့ တောက်ပစွာ မြင်နိုင်တဲ့နေရာကို သင့်ကိုယ်ကို ရွှေ့ပေးပါ၊ အဲဒါကို contre-jour အလင်းပေးနည်းစနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အလင်းရောင်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် လို့ ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းစနစ်က ပန်းတွေကို တောက်ပစွာ လှပစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရာသီအလိုက်ပန်းတွေရဲ့ လှပတဲ့ အရောင်သွေးတွေကိုဖော်ကျူးတဲ့ နေရာမှာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဒီနည်းစနစ်ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ကိုးကား။ T3 Online
သင့်ရဲ့ Fujifilm X Pro-2 ကို အစွမ်းကုန်အသုံးချနိုင်စေမယ့် အချက် ၆ ချက်
April 10, 2017 Jedi 0
2 Comments on လူသစ်တန်းလဲမဟုတ် ဆရာကြီးလဲမဟုတ်သေးတဲ့ ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေအတွက် အကြံပြုချက်များ
sunhtay July 10, 2016 at 5:41 pm
Phyo - SP August 6, 2016 at 11:10 am